ရတနာပုံ ဝက်ဘ်ပေါ်တယ်လ် အဖောက်ခံရ (stealing) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရတနာပုံ ဝက်ဘ်ပေါ်တယ်လ် အဖောက်ခံရ (stealing)
ရတနာပုံ ဝက်ဘ်ပေါ်တယ်လ် အဖောက်ခံရ (stealing)
Posted by white on Nov 23, 2010 in Myanma News, News | 12 comments
နိုဝင်ဘာ (၂၃) ရက်နေ့သတင်းတို
အမျိုးသားအဆင့် အဖြစ် စတင်လိုက်သော ရတနာပုံ ဝက်ဘ်ပေါ်တယ်လ်တွင် ဟက်ကာများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းစကားကို မကြာသေးမီက တင်သွားပြီးနောက် ယခုအခါ အဆိုပါဆိုဒ်မှာ လုံးဝ ပိတ်သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပြည်တွင်း အင်တာနက် လုံခြုံရေးကွန်ရက်အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈ သန်း အကုန်အကျ ခံထားရကြောင်း၊ စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပြည်တွင်း ဆာဗာများ DDoS ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအပါအဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ဖိုးခန့် ဆုံးရှုံးနစ်နာနေကြောင်း ပြည်တွင်းမီဒီယာများက ဖော်ပြသည်။
အမျိုးသားအဆင့် ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် … ဝိုင်မေးလ်လုပ်မယ် … ဝိုင်တော့ခ် လုပ်မယ် ဘာညာ ကြွေးကြော်ပြီးသကာလ တလကျော် ကြာအောင် တိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်ဆိုတဲ့ ရတနာပုံ ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် ဟိုတလောကတော့ ပြန်ပွင့်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ဆုံး ပိတ်မသွားခင် ဟက်ထားတာကို ဒီလို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ အောက်ဆုံးမှာတော့ “သန်းရွှေ၊ အင်တာနက် ပြန်ရချင်ရင်တော့ အမေစုကို အာဏာလွှဲလိုက်” လို့ ရေးထားပါတယ်။
မြန်မာ ဟက်ကာများရဲ့အစွမ်းကို တန်ဖိုးထားသောအားဖြင့် ……
အင်တာနက်ပျက်တာ အမေစု ထောက်ခံသူတွေကြောင့်လို့ လူငယ်တွေနဲ့ ရန်တိုက်ပေးတာလားသိဝူး
ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ဖိုးခန့် ဆုံးရှုံးနစ်နာ တာလဲ မေစု ထောက်ခံသူတွေကြောင့်လို့ လုပ်တာလားသိဘူး
သူတို့ ကို ပြည်သူလူထုက အရမ်းအရေးလုပ်ပါတယ်ဆိုတာကို
တကယ်ဆို သူတို့ ကို ဘယ်သူကအရေးလုပ်နေလို့ လဲ
အခုတော့ ၇တနာပုံ တယ်လီပို့စ် ဆိုဒ်က ဖွင့်လို့ ရနေတယ်နော.်.
အဲ.. မရဘူး ဗျ. ဖွင့်လို့ ဆိုဒ်တော့ ကျလာတယ်.. နောက်ခံ theme ပဲ ပေါ်နေတယ် ဘာမှ ပေါ်တော့ဘူး..
လေး စား တယ် ဗျာ .. မြန် မာ ဟက် ကာ များ ကို … ဒီ ထက် ပို ပြီ လုပ် ရ မှာ ..
ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုက်တွေ အကုန် ဖွင့်လို့ရအောင် တခါတည်း ၀င်ပြန်လိုက်ပြီးရေ.. ဒါဆို ဘာမှ ကျော်စရာကို မလိုတော့ဘူး.. အဟေး
တစ်မျိုး မထင်ကြဘူးလားဟင်။ လှည့်ကွက်ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား??
အစရိုးမဟုတ်တောင် အန်တီကို မလိုတဲ့လူတွေ လုပ်တာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား???အဲလိုဆိုရင် သူတို့ အကွက်ရအောင်လေ။
နောက်တစ်ချက်က အဲလိုမဟုတ်တောင် အန်တီကို တကယ်လိုလားတဲ့လူ လုပ်တယ်ဆိုရင် အရှည်ကိုကြည့် သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ သူတို့က ငြိ်မ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ သိပ်တောင် အပြင်ပေးမထွက်ချင်တာ။ အခုလို လုပ်လိုက်တော့ သူတို့အတွက် အကွက်ကပြီး တစ်ခုခု တောင် ပြန်လုပ်မလားလို့ စိုးရိမ်ရတယ်။
ကိုယ့်ဘက်က အပိုင်မဖြစ်သေးဘဲခြိမ်းခြောက်ရုံဆိုရင် ဘယ်သူနစ်နာမလဲ သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ အစရိုးက နဂိုကတည်းကမကြည်တာ ဒီတစ်ချက်ကိုထောက် နောက် လာမယ့် အချက်တွေနဲ့ ထောက်ပြီး အန်တီကို ပြန်ထည့်လိုက်ရင် စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ဥာဏ်မမှီတော့ဘူး။ ဒါမဲ့ လုပ်ရင်တော့ ရေရှည်ကို တွေးပြီးမှ လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုလို တိုးတက်တဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။
တော်လိုက်တဲ့ မြန်မာဟက်ကာတွေ.. တကယ်ချီးကျူးပါတယ်…